Gòatemala : Fanafihana Mahery Vaika Atao Amin’ireo Mpitolona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2012 11:26 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, বাংলা, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Miha mitombo hatrany ny fanafihana mahery vaika atao amin'ireo mpitolona ao Gàatemala. Lolita Chavez, mpikambana ao amin'ny Fila-kevi-bahoaka K’iche , no niharan'ny fanafihana nataon'ireo andian-dehilahy mirongo fitaovam-piadiana izay niezaka namono azy rehefa avy namonjy fihetsiketsehana milamina manohitra ny fanararaota-pahefana amin'ny fitrandrahana sy ny tetikasa manimba ny tontolo iainana izy. Nanazava toy izao ilay mpanao gazety mpaka sary James Rodriguez, ao amin'ny Mimundo.org :
Ny marainan'ny 4 jolay, nanao fihetsiketsehana milamina ireo vondro-piarahamonina eo amin'ny vahoaka 400 eo ao Quiché, niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny CPK mba hanohitra ny avonavon'ny ben'ny tanàna sy ny tsy fanajany ny fitsapa-kevi-bahoaka mandà ny hivarotra ny taniny amin'ny firenena maro, izay lany nandritra ny fifidianana fitsapan-kevi-bahoaka tamin'ny taona 2010.
Notsenain'ireo andian-dehilahy mità-piadiana toy ny antsibe, kobay ny mpikambana ao amin'ny CPK rehefa tonga tao an-tampon'ny Xetinap Quinto ny mpanao fihetsiketsehana, narahin'ireo andian-dehilahy izy ireo ka maro no voavono. Lolita Chávez no tena kinendrin'izy ireo satria nantsoiny ary narahiny, avy eo noratrainy. Niharan'ny fahatapaha-taolana sy ny kapoka izy, saingy afaka nandositra ireo andian-dehilahy ihany. Na dia izany aza, vehivavy telo hafa no tsy maintsy nahiditra hopitaly noho ny ratra mafy nahazo azy.
Lolita Chavez, sarin'i James Rodriguez de MiMundo.org, nahazoana alalana ny sary.
Roa herinandro taty aoriana, tao an-tanàn-dehibe ao Gòatemala, Yolanda Oquelí Veliz, mpisolovava manokana momba ny zon'olombelona sy lehiben'ny tolona manohitra ny fiitaran'ny fitrandrahana akoran-javatra indray no kinendrin'ny fanafihana hafa, nandritra ny fihetsiketsehana milamina nataon'izy ireo. Nitatitra ny zava-nitranga ny bilaogy FrontlineDefenders :
Mpiaro ny zon'olombelona ao San Jose de Gulfo i Yolanda. Izy no lehiben'ny hetsika manohitra ireo tetikasa fitrandrahana akoran-javatra Exmingua. Araka ny vaovao maro samihafa voaray, toe-draharaha mamaivay ao Gòatemala ny fitrandranana volamena sy volafotsy, ny fasika sy ireo akora ampiasaina ho tangaro. Ny zava-misy anefa, tsy mba nampahafantarina izany ny fiaraha-monina voakasiky ny tetikasa fitrandrahana. Tsy mba nisy ny vaovao nampitàina ary tsy nisy ihany koa ny fangalana ny hevitry ny mponina mba hijerena izay mety ho fihantraikan'izany eo amin'ny tontolo iainana toy ny fahaloton'ny renirano, ny fahatapahan'ny ala sy ny fahalotoan'ny loharano. Tsy misy olona ihany koa miresaka izay mety hitranga rehefa tapitra ny fe-potoa-piasan'ny fitrandrahana akoran-javatra, toy ny famerenana ny tontolo iainana amin'ny laoniny.
Yolanda Veliz. Sary: James Rodriguez de MiMundo.org, nahazoan-dalana ny sarty.
Tsy vao voalohany izao fandrahonana mihatra amin'i Yoly izao noho ny hetsika hitolomany. Efa taratasy fitarainana am-polony no efa napetraky ny mpisolovavany (pro bono). Niharan'ny fanafihana tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso i Yolanda Veliz, sy ny soratsoratra (graffitis) amin'ny rindrina ary ny fandrahonana azy sy ny zanany. Tsy nisy ny andraikitra noraisin'ny manam-pahefana nandritra izany.
Lolita Chavez. Sary: Rodriguez de MiMundo.org, nahazoan-dalana ny sary.
Tambazotra isan-karazany no niantso ho amin'ny hetsika maika, toy ny fiarovana ireo mpitolona, tsy nahitam-baliny avy amin'ny governemanta anefa izany. Tsy nandrenesam-peo ihany koa ny firaisamonim-pirenena manoloana izao heloka be vava izao.
Mibaribary ny voka-dratsy mety hihatra amin ‘ireo olom-pirenena voakasika mivantana amin'ny fitrandrahana ataon'ireo orinasa amin'ny sehatry ny angovo sy ny fitrandrahana akoran-javatra. Fanampin'izany, midika ho toy ny fankatoavana ny herisetra miseho ny fahanginan'ny fampahalam-baovao sy ny fiarahamonim-pirenena ao Gòatemala. Ny fitantarana na ny famoahana ny fijerin'ireo vahiny mpampiasa vola no mibahana ao amin'ny fahitalavi-panjakana mahazatra, izay manasokajy ny ankamaroan'ny hetsiky ny mpanohitra ho toy ny asa fampihorohoroana, ary tsy mba mamoaka ny loza hatrehin'ireo mpitolona sy ny olom-pirenena izay manohitra ny fitrandrahana
Tsy mba nisy akory ny fandraisana andraikitra avy amin'ny manam-pahefana manolona ny fitomboan'ny isan'ny fanafihana mihatra amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona, na eny amin'ny faritra andrenivohitra izany na eny ambanivohitra.